कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्री पत्नी राधिकासँग यति धेरै सम्पत्ति? भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा कति छ जग्गा ? – Sapana Sanjal
May 28, 2021 239
Sapana Sanjal : नेपालमा अधिकांश नेताहरूका श्रीमती ‘धनी’ हुन्छन्। नेताहरू चाहिँ आर्थिक रुपमा विपन्न। कसरी? जति–जे सम्पत्ति हुन्छ, त्यो श्रीमतीको नाममा राखेपछि अख्तियारले देख्दिैन।
अख्तियारले खोजी हाले श्रीमतीले कमाएको भनिदियो, सकियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि ओली हरेक दिनजसो अलग–अलग पोसाकमा देखिन्छन्।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीकी श्रीमतीको नाम सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा जग्गा जमीन छैन। उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार तलबभत्ता वापतको ४२ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ मा डेढ रोपनी जग्गामा २ तीन तले घर पनि राधिकाकै नाममा रहेको छ।
Nextआजको आफ्नो राशिफल हेरि सच्चा मनले एक शेयर गर्दै बाग्लुङ कालिका माताको दर्शन गर्नुहोस् ।।